ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ အပေါင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
ဒါဟာအတွက်ယခုရရှိနိုင် ။ ဒီစကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ရှိ၊အများအပြားကဲ့သို့ပင်၊ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊နှင့်တစ်ခါတစ်ရံဝမ်းနည်းမှု။ မဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဦးခေါင်း၌၏ဝမ်းနည်းဖွယ်အကြံအစည်၊ဒါပေမယ့်စိတ်နှလုံး၏ဝမ်း။ မတှေ့နိုငျ။ မေတ္တာသည်ရှာဖွေရေးများအတွက်ဘယ်ကိုပြောင်းဖို့လိုပါတယ်၊အဘယ်အရာကိုလိုအပ်ချက်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့။ သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကဤသည်ဆိုက်ကိုအကွောငျး၊တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ်အထိရောက်ဆုံး။ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအဘယ်သို့သောအအအောင်မြင်မှု၏ဤစီမံကိန်းပေါင်းစပ်ခေတ်မီအချက်အလက်နည်းပညာ၊တိုးမြှင့်လုံခြုံရေးနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏အချက်အလက်၊နှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေနှင့်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းမွတ္ထားပင်ဆိုလိုသည်နေသောလူများနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ကွန်ပျူတာ"နားလည်"။ လူတိုင်းသိသူအပေါင်းတို့သည်ဤအရေးပါသောဒြပ်စင်။ အခွင့်အလမ်းလွဲချော်ခံရဖို့မတစ်ဦးအပြုသဘောသဘောထား၊ပိုပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုအတူအသက်တာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရှားပါးပျင်း။.
စို့ငါနမ်း၏လည်ပင်းနှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုချုပ်လက်အောက်က။ ကျွန်တော်ရောက်မှတက်၏နို့သီးခေါင်းစတင်ညင်သာစွာနို့စို့အပေါ်သင်၏လျှာ၊ငါစက်ဝိုင်း။ ထိုအခါငါသွားပြီးအာရုံစိုက်သင့်ရဲ့အစာအိမ်၊အဲဒီနောက်ကျွန်မပတ်ပတ်လည်လှည့်ရန်နမ်း၏pubic ဧရိယာ၊သင့်တပြင်လုံးကိုလာျစက်ဝိုင်းအတွက်၊ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသာအဘယ်သူမျှမအလျင်အမြန်ရွှေ့ဖို့သင်ရရှိလာတဲ့အထိလုံးဝကင်းပြီးမီးရှို့၏အလိုဆန္ဒ၊ဒါပေမယ့်ထိုနောက်ငါ၌အဘယ်သူမျှမအလျင်အမြန်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်သင်အပေါ်ငါ့လျှာသည်။ ငါညင်ညင်သာသာနမ်း၏ၡမ်ား၊၊ညင်သာစွာထို့နောက်ညှပ်ငါ့လျှာ၏Clit နှင့်စတင်နို့စို့သင်ညင်သာစွာ။ နှင့်ဤရုံအစအဦး။ ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်ရေးအတွက်အစည်းအဝေးအတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလျှင်၊သငျသညျပျော်စရာရှိသည်ချင်၊တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။ Khujand
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသိအကျွမ်းအတွက် Ferghana။ ဒီေနရာကိုသာလေ့လာမှုနှင့်အတူမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှ Ferghana၊ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်များအတွက်လွယ်ကူသော။ လည်းသင်၏အွန်လိုင်းဒိုင်ယာဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအားလပ်ရက်လီေ၊အများကြီးပို။ အစည်းအဝေး၊လူမှုရေး၊ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်၊အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၊မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေပြီးရည်းစားများအတွက်အားလပ်ရက်နှင့်ခရီးသွားလာ။ မမေ့မလြော့ပါ။ ဒီေနရာကိုသာလေ့လာမှုနှင့်အတူမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှ Ferghana၊ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်များအတွက်လွယ်ကူသော။ လည်းသင်၏အွန်လိုင်းဒိုင်ယာဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအားလပ်ရက်လီေ၊အများကြီးပို။ အစည်းအဝေး၊လူမှုရေး၊ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်၊အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၊မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေပြီးရည်းစားများအတွက်အားလပ်ရက်နှင့်ခရီးသွားလာ။ မမေ့မလြော့ပါ။
သငျသညျဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဝင်ရောက်ဆိုက်မှပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာများ။ ကိုအတည်ပြုရန်သည်ဤအကြောင်းအမှန်တကယ်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းအရေအတွက်ကို။ ငါအဘို့:အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာကိုယ်အချစ်၊ေလးစားစေနှင့်အကြှနျုပျကိုအတူအလွန်ပျော်ရွှင်၏ရှေ့မှောက်တွင်။ ငါ၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ သူတို့သင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ ဘယ်တော့မှစိတ်မကောင်းခံစားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့။ မကြိုးစားကြဘူးအသင္းဒုတိယမိသူဖြစ်ရမည်ဘုရား၊အရှင်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအလွန်အ၊အလွန်:အသန်ဆုံး၊အချစ်၊ခိုင်ပြန်မျိုးလြယ္အိတ္၊အဘယ်သူသည်ချိုမြိန်၊ကြင်နာပြီးချစ်တဦးတည်းနှင့်အတူအဘယ်သူသင်ကျော်လွှားပြဿနာတွေအားလုံးကို။ မကြိုးစားရသူင့္ဆီဓံ:ဘောလုံး-ဖို့ကြိုးစားသွားကြကုန်အံ့၊အ sauna၊သူငယ်ချင်းများအတွက်မွေးနေ့ကို၊ငါးဖမ်းနံနက်ယံ၌အတွက်ယုံကြည်၊သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မှာတနာရီလောက်အတွက်အရေးပါသောအရိုက်ချက်များပစ်ခတ်။ စေသူ့ကိုသတ်ပစ်မိမိအပေါ်ရေချိုးခန်းအထစ်၊အဘယ်သူမျှမဟုတ်ကဲ့၊ငါစိတ်ထဲမထားပါဘူး။ အိတ်သယ်ဆောင်ခွင့်ပြု မိုးသည်းထန်စွာနံနက်စာပြင်ဆင်အိပ်ရာအတွက်နံနက်ယံ၌။ ရှိမရှိဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအိမ်တွင်လာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အိပ်ခန်းသို့မဟုတ်အနုပညာနှင့် depraved မိဖုရားအားဖြင့်မိမိအခြမ်း။ ပဲဘာမှရှုပ်တယ်။ လျှင်သင်အဆီနှင့်ပျင်းရိ၏ခင်ပွန်းအပေါ်မိမိအခြမ်း။ မနစ်အတွက်သူ့ကိုမျက်မ့္မယ္လုိ။ ဒါကြောင့်မဖွစျနိုငျဘာမှမကောင်း။ ကိုင်ဘူးသူ့ကိုအားဖြင့်ခြေထောက်အလိုအခွေး။ စေသူ့ကိုသွား၊ပြီးတော့သူပဲအပြန်သင်ဖို့လာကြ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်တိုတောင်းကြိုး၊အဆိုပါပိုမြန်တစ်ခုခုအမှားအယွင်းနှင့်အတူ။ ဘယ်တော့မှ။ သင်ကငါ့စကားကိုနားထောင်။ သူကပေးသည်ချီးမွမ်းပြီးလျှင်၊ထို့နောက်သူက၊သင်တို့အဘို့အ၊ထိုကြယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါဖြစ်သူအမျိုးသမီးမဲ၊ဒါပေမယ့်သာအချိန်။ ငါအမေ့လျော့တော်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်၊မှာရွေးလမ်းဆုံလမ်းခွမှာ။ ငါနှင့်အတူအဆုံးသတ်အခန်းကြီးအပေါ်အနည်းငယ် carelessness။ သင်ပြီးသားငါ့အဆိပ်၊ဒါကြောင့်ကယ့်ရှိပါတယ်အဘယ်သူမျှမယျ။ ငါအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊သင်ကိုယ်အတိုင်းခပ်နွမ်းနွမ်း၊သင်မှသူ၏လက်ဝါး၊ငါချစ်ရာသခင်၊ငါ၏ဘုရား။ ငါဟာမင္းအတူနိုးထနှင့်နံနက်ယံ၌၊ပတ်ပတ်လည်ဆွဲထား။ ငါအမျိုးသမီးတစ်ဦး။။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနေ့ကိုရောက်လာသည့်အခါကွာအဝေးလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကြီးကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းသင်တို့၏လမ်းပြန်။ ကြည့်ရှု အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့မျက်မှောက်၌၊သောအခါတွင်မွေးဖွားမျက်စိသို့ထွက်ဝင်၏အနက်အနေရဲ့ဆည်းကယ်ဖို့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်စိမှအိပ်ရာ။ ပြောပြထိုမိန်းမသည်အဆိုပါစကားများပင်လျှင်အမျိုးသမီးကြီးမှား:ကစားခြင်း၊ရှုပ်ထွေးစကားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပေးသောပန်းပွင့်သည့်အခါသူမလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့်တံတား။ အခါကံကြမ္မာလျှော်၊အသွားကြဖို့လမ်း-ကယ်အမျိုးသမီးအတွက်အိပ်ရာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ဦးလိုအပ်သည်ဒါအနည်းငယ်သာဖြစ်မွေးဖွားတဖန်:အစိမ္း၊ပဲတစ်ချက်။ တစ်ခုတည်းစကားလုံး။ တခါတရံသာပန္းပြ။ ရှိပါတယ်သောသူအမျိုးသမီးများအတွက်ကြည့်ရှုမျက်စိ၌နေ့တိုင်းသင်ရှာတွေ့သည့်အခါ၊ထို့နောက်နှင့်သူမ၏မှာကြည့်ရှုယူ။ သို့သော်လည်း၊ငါ့ကိုပြောပြပါမနေပါကြောင်းမော်ဒယ်မှာရှာဖွေနေသင်အများနှင့်ကစား။ ဒါပေမဲ့၊သိသိသာသာ၊လူအပေါင်းတို့သည်အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသာအကြောင်းပြချက်၊သင်အပွမှအလွန်အစဖို့၊ဖြစ်လာ၏ဆွဲဆောင်မှု၏ဗဟို၏။ ဒါကြောင့်၊ငါ၏ဘုရားသခင်၊ထိုကဲ့သို့သောအရောင်အဆင်း၊အရာအတွက်စုစုပေါင်း၏ဣတ္နှအရည်အသွေး။ ပေမယ့်လူတိုင်းစိတ်အားထက်သန်ဤထုတ်ဖေါ်လျှို့ဝှက်ချက်၊သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်ရှိနေလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု။ ဆံပင်ကောက်ကောက်:-ဖေဖော်ဝါရီချိုင်း-တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတွက်အချစ်၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်လာပြောင်းလဲမတ်လ-ခက်ခဲတဲ့အတွက်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ကံဧပြီလ-မေလ-spoilage၊ အစာရှောင်ခြင်းမေတ္တာ၌ဇွန်လ-အဆင်းလှသောနှင့်အတူမကောင်းတဲ့ဒေါသ၊လှသောအဆင်း၊ဒါပေမယ့်ဆိုးသောဇွန်လ-လု၊မေတ္တာ၌သြဂုတ်လ-စင်ကြယ်သောနှင့်အတူမကောင်းတဲ့-ကျန်းမာရေး၊ဒါပေမယ့်မေတ္တာအထိေအာက္တိုဘာ-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းအေးချမ်းခြင်း၊လိုအပ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ NOVECHNY-အဆိုး၊အလှကဲ့သို့အများအပြားမိန်းကလေးငယ်ဇင္ဘာ-ကြီးမားတဲ့ဒီဇိုင်း၊နိုင်ပါ။ အဆိုပါမိန်းကလေး:ဇန္နဝါရီလ-ကောင်း၊အဆင်းလှ၏၊ချစ်ခင်ဖေဖော်ဝါရီ-ချစ်သူတို့၊၊ကျိုးနွံမတ်လ၊ကောင်းသောအကျိုး၊ဧဆွဲဆောင်မှု၊အပြစ်ပြုခြင်းငှါကောင်း၊မတ်၊မျိုး၊အလွဇွန်လ-လူနာ၊အစာရှောင်ခြင်းနှင့်မင်္ဂလာဇူလိုင်လ-လှပသော၊အမျက်ထွက်၊စမတ်-လူနာ၊ကျိုးနွံ-၊ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လှသည်၊မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်တိုဘာလ-မတ်၊အမျက်ထွက်ခြင်း၊တရားမျှတဖေဖော်ဝါရီ-မနာ၊ပျော်စရာ၊စိတ်အားဒီဇင္ဘာ-လှပသော၊အမျိုးအစား၊ယုတ်သင်သည်ရှေ့တော်၌သင်၏ပခုံးအပင်နှင့်အတူအကြှနျုပျကိုပိုင်။သူ့အဘို့၊ကိုယ့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးငိုဘယ်လိုသိရန်ခါးသီးမှုကိုငါ့နှလုံး၌အပူ။
ငါ၏ပခုံး။ ခင်ဗျားအဝေးမကြည့်ပါနဲ့မျက်စိ၌ငါ့ကို၊မနစ်သာ၊မထ၊ငါသည်သင်တို့စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို၊ ဘယ်လိုကောင်းကင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ငါ၏မျက်စိဒါကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွား။ တာဝေးအကွာ၊ငါအလုံအလောက်လက်ကိုယူမှ၊ကာကွယ်ခြင်းနှင့်သက်သာရုံသက်သာ၊ဒါကြောင့်လဲကျနော်လေးစားအချစ်သင်၏နှလုံး၏မေတ္တာတရားအပြည့်နဲ့ညင်ညင်သာသာကိုရိုက်နှက်။ သင်မည်သို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်နွေးထွေးမှုဝေးသောလက်တော်ကြီး၏ရည်မှန်းချက်အတိုင်းလူတွေအားလုံးအသိ။ မေတ္တာသည်အခြား၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို။ ကျနော်တို့နိုးထအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်နိုးသင်တက်၊နှင့်အခြားအရာတစ်ခုခုလိုအပ်။ အဠာသာသဘာဝကျပါတယ်လျှင်မျှဝေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်များကိုတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ထိုကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးမှာပေါ်ပေါက်အခါယခုအချိန်တွင်ကျနော်တို့အလွန်အကန့်သတ်အဆင့်အခါ၊ကျနော်တို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားဖို့အသေခံခြင်းနှင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခံရ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်အစည်းအဝေး၊ဒါပေမယ့်မကြာခဏဘယ်လိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားမိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ တစ်ဦးဖုန်ထူအဟောင်းမော်စကိုပြီးခဲ့နှစ်စွန်း-ဖန်ခွက်ပြတင်းပေါက်။ အနီးအနားရှိနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရာင္ကအနက္ေရာင္လူချစ်လူအများကြီးတင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမ။ အကြောင်ပဲသတိပြုမိတယ်။ အကြောင်းနည်းနည်းရှိမရှိကြည့်ပြီးအဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း။ အိုး၊အဘယ်သို့သင်၏နှလုံး။ အခါ၊သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့သူညင်သာစွာတိုးတိုးသူမ:"အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမ။ ကြောင်ကသာ ။ တစ်နေ့မှာသင်ရုတ်တရက်ကျနှင့်အတူပန်းခြံတွင်လူ။ ကောင်းစွာ၊အကြောင်မဲ့အရူးသွား။ မြည်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ဪ။ ဘာဖြစ်တာအတွက်လူတိုင်း၏ဦးခေါင်း။ ကြောင်သည်ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့၊မိမိအကြောင်။ ဒါဟာကိုယ့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းကိုသင်၏ခင်ပွန်း။ ကြောင်စောင့်ဆိုင်း။ မအိပ်၊မသောက်ဘဲ၊ပြီးမစား။ သူစောင့်ကြည့်ရှယ်သည်အလင်းမှလာနောက်တဖန်အ။ ကိုယ့်အဲဒီမှာထိုင်။ ပင်အနည်းငယ်မီးခိုးရောင်၊သူကပြန်လည်ရောက်ရှိ၊နှင့်တိတ်တဆိတ်မှသူမ၏:မင်္ဂလာပါ။ တစ်ဦးဖုန်ထူအဟောင်းအိမ်တွင်မော်၊နှစ်စွန်း-ဖန်ခွက်ပြတင်းပေါက်ခုနစ်။ နှင့်အခြားအနုတ်ရာစုနှစ်၏။ သင်အမှန်တကယ်ငါ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ၊ကြောင်။ ကြောင်မစောင့်ပါနဲ့။ တုံး၊တုံး၊ငါ့လူ။.
အဘယ်ကြောင့်သွားနှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်စူးစမ်းဖို့လှပတဲ့နေရာ၏Zaragoza။ ခရီး Zaragoza ရဲ့ Nuestra Senhora စာလှုံဘုရား၊သတိထားပါဘုရား။ ဆက်လက်သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး၏Moorish ဗိသုကာ၊အလည်အပတ်အသင်းတော်၏အာင္ဆန္းစ်းေျ၊ဝှက်ထားသောအတွက်အသေးစားလမ္းစင္စစ္အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်၎င်း Octagonal Moorish မျှော်စင်နှင့်နံရံအလှဆင်နှင့်အတူ၊စိန်ပွင့်။ နှင့်အတူလူကိုရှာဖွေဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်အတွေ့အကြုံကိုအလှအပဤမြို့၏အတူတကွ။ မေးမြန်းသင့်ရဲ့ချစ်ရသူထဲက၊နေ့စွဲအပေါ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူသီးအသီးအခြား၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်၏ဆက်ဆံရေးကိုယူလိမ့်မည်အနက်ဖွင့်။ လူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာတွေ့လိမ့်မည်နေ့တိုင်းဆုံပြီးမေတ္တာ၌လဲကျ။ လက်လွတ်မမူပါအခွင့်အပူးပေါင်းဖို့:အဆိုပါအကြီးမားဆုံးလူမှုကွန်ယက်။ ရဲရင့်ဖြစ်၊ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်မည်မဟုတ်။ သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲ။
တွေ့ရှိ Bilhorod-Dnistrovskyi နှင့်အတူမိန်းကလေးမှ Belgorod နှင့်အတူကောင်လေးထံမှ Belgorod-Dniesterရက်စွဲတစ်ခုအတွက် Velyka mykhailivka အစည်းအဝေးနှင့်အတူမိန်းကလေးအကြီးအ Ural အကျွမ်းနှင့်အတူကောင်လေး၏အကြီးအ Uralsရက်စွဲမိန်းကလေးများအကျွမ်းနှင့်အတူကောင်လေးရက်စွဲအတွက် Kominternivske အကျွမ်းနှင့်အတူမိန်းကလေးမှအကြာတွင်ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းအကျွမ်းနှင့်အတူကောင်လေးထံမှအကြာတွင်ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း
သူတို့တွင်အဘယ်သူသည်သိမက္ကရက်မှကျေးဇူးတင်စကား ၊လူအနည်းငယ်ကသာသိရှိကြောင်းတစ်ဦး"အစ်ကို"-၊ပေါ်သည်ထင်ရှားမီကြာမြင့်စွာသော။ တကယ်တော့၊ များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများအပြားအမျိုးအစားများ ။ ငါအကြံပြု၊သင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သောက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို၎င်း၏စားသုံးမှုသည်။ (စပိန်အတွက်နည်းလမ်း"သောက်")အမျိုးသမီးရက်စွဲတပ်ဖြင့်ရရှိသော ပြီးတော့ကြိုတင်ဖျော်ရည်၏အချို့မျိုးကွဲခြင်း (မိသားစုညွတ်)အပြင်နှင့်အတူသကြားနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ။ ကနေကြိုတင်(အပေါင်း)၊မက္ကဆီကန်နွယ်၊အဘယ်သူသည်အရာထံမှလေ့လာသင်ယူအများစုကိုရောက်မှမိမိတို့ပိုင်နက်တွင်ဤအရာစု။ အဲဒီအရင်က၊အယသောက်တဲ့၏အတိမ်ဖြူရည်-အနိမ့်အတန်းမသောက်(ဂ)၏ ဖျော်ရည်ရိုး၊။ ကံ စတင်စမ်းသပ်နှင့်အတူဒေသခံကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများရရန်တစ်အိမ်"မီး"။ မကြာမီအ 'ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအောင်မြင်မှုနှင့်အတူသရဖူဆောင်းခဲ့ကြ။ ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထား၏ မှနောက်ကျောကွာဟ။ ဖခင်၏"သောက်စရာ"ကပါဘူး ၊သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးပထမဆုံးစက်ရုံများအတွက်ထုတ်လုပ်မှု။ အများစုကို၊ ရက်ဖြစ်လာခဲ့သည်၏အမျိုးသားရေးသောက်စရာ။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကအရမ်းရိုးရှင်း။ ပထမဦးဆုံး၊အ အသီး၊အသက်နှစ်၊ပယ်ဖြတ်ပန်းပွင့်ရှေ့တော်၌အ။ ဤအချိန်တွင်၊သူတို့ဆံ့အကြီးဆုံးပမာဏဓာတ်၏လိုအပ်သောအချဉ်ပေါက်သည်။ အကူအညီဖြင့်များ၏၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီခုသာချန်ပြီး၊အတွင်းအသီးများအတွက်သောက်သုံး။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည်၊သန့်ရှင်းစင်ထဲမှာထည့်ထားမှာအထူးကျောက်ချွန်သောကတော့ပုံသဏ္ဌာန်မီးဖိုနဲ့မုန့်ဖုတ်များအတွက်ရက်ပေါင်းများစွာ။ အချစ်အသီးသီး၌ဖုတ်အတြက္သာျထိရစးစုလိုက်အပြုံလိုက်။ ပြီးနောက်စော်ဖောက်ခြင်း၊ပေါင်းခံရာအရပ်ကိုကြာ။ တစ်ခါသာရှေ့တော်၌အနှစ်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊အဆိုပါဒီဂရီ၏ခုခံ၏အသောက်စရာဖြစ်ပါသည်သိသိသာသာနိမ့်များ၏အရည်အသွေး ၊အားဖြင့်နှစ်ဦးကြိမ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးနောက်ပြောင်းရန်နှစ်ချက်ပေါင်း၊အရည်အသွေးနှစ်ခုစလုံး၏အချိုရည်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ပေါင်း ရက်ရောရေနှင့်အတူတပ်။ ကုန်ကြမ်း။ များထုတ်လုပ်မှုများအတွက် တွေရှိပါတယ်လေးခုအဓိကမျိုးကွဲ:ငါ။ ကထုတ်လုပ်မှသာအသီးဖျော်ရည်၏အပြာရောင် သား။ နည်းပညာ။ အတွက်အများဆုံးအမျိုးအစားများ ၊သကြားကိုထည့်သွင်း၊မယူကြဘူး ။ ကြွင်းသောအရာအဘို့၊ခေတ်မီနည်းပညာများအတွက်ပြင်ဆင်နေနှစ်ဦးစလုံးအချိုရည်တူညီနေတယ်။ ဒေသ။ ထုတ်ကုန်များကျော်အားလုံးမက္ကစီကို၊နှင့် သည်ဒေသခံတစ်ဦးထံမှသောက်ပြည်နယ် ၊စေရန်အတွက်ကန့်သတ်ဧရိယာ။ အခုခြေရာခံ။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများအရေအတွက်တစ်ပုလင်းနှင့်အတူကျိုင်းကောင်၊အရွက်နှင့်အသီးကိုသီး၏။ ပစ်မှတ်၏ဤအင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုနေစဉ်၊ကျနော်တို့သတိထားမိ ဖြစ်ပျက်ပါဘူးနှင့်အတူကျိုင်းကောင်။ အောက်ခြေမှာ၏အချို့ ပုလင်း၊ထူးဆန်းတဲ့အဖြူရောင်ကောင်မြင်နိုင်သည်။ ဒီခူလိပ်ပြာတစ်ဦးကပ်ပါးသောဘဝအတွက်အ ။ နှစ်ခုမျိုးရှိပါတယ်အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏:အဖြူနှင့်အနီရောင်(ရွှေ)။ အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာအချိုရည်၊အကိုသာအနီခူရာ၊ဘဝအသက်တာအတွက်အဓိကအ ၊ထည့်သွင်းထားသည်။ အဖြူ"ပိုးကောင်များ"ဘဝတွေကို၊အရွက်အတွက်ကြီးထွားလာနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်လာ၊ဒါကြောင့်အဖြစ်တန်ဖိုးရှိသောအဖြစ်၎င်း၏အနီရောင်"သမ္မတ"။ ဒါပေမယ့်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ခူအတူတစ်ပုလင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသော အဘိတ်။ တကယ်တော့အရက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ၊မည်သည့်ပိုးမွှားဖြစ်လာ။ ဒီအမြင်နှင့်ကော်ပိုရိတ်ရိုက်ထားအာရုံစိုက်မှုကိုဖမ်းမိ။ ခဏတစ်ဖြုတ်ပြီးနောက်၊အခြားအမှတ်တံဆိပ်အမြင်အတွေ့အကြုံ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အများ၏ရှေ့မှောက်တွင်"ကောင်"သည်အားဖြင့်ရှင်းပြရန်ဆန္ဒပြအရည်အသွေးမြင့်မားသော(ကောင်းရက်၊အင်းမပြိုကွဲ)နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ။ ထို့နောက်သူကစတင်သတ်မှတ်ကုထုံးဂုဏ်သတ္တိများတိုးမြှင့်ခွန်အား၊နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနောင်တ။ မြင်မြင်၏ပြိုင်ဘက်၊ ထုတ်လုပ်သူများစတင်ဖြန့်ဖို့နောက်ထပ်အဒဏ္ဍာ-"ကောင်"အကြောင်းတရားများချောက်ချား။ တကယ်တော့၊အဲဒီခူကောင်တွေဟာလုံးဝအန္တရာယ်ကင်း။ သူတို့ကအထူးသဖြင့်အကြီးထွားအပေါ်လူငယ် ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကုသပိုး။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ်တစ်နှစ်အတွက်ခုခံတွန်းလှန်ရန်အတွက်စင်ကြယ်သောအရက်သမားအလတ်စား၊သတ်ပစ်ဖို့ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောဘက်တီးရီးယား။ တစ်ပုလင်း ၊အတူခူ။ ဤသူတို့သည်အချိုရည်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာ၊နှင့်အရသာမရှိသူများထံမှကွဲပြားခြားနားဘယ်မှာမျှမရှိ"တီကောင်"။ အခူအလိုရှိသောအဖြစ်။ အကယ္ပန္ဆိုဖြစ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၊သငျသညျအထဲကနှင့်အတူပုလင်းနဲ့ပဲပစ်ပယ်။ စင်ကြယ်သောပုံစံတွင်။ ကိုသောက်မည့်အခန်းအပူချိန်မှာ။ ယဉ်ကျေးမှုကို၎င်း၏အသုံးပြုမှုနဲ့ဆင်တူရက်။ သို့သှနျးလောငျးနှင့်အတူယစ်မူးအတွက်အသေးစား ၊ဖမ်းရန်ကြိုးစားနေအပေါင်းတို့လူသိများအရသာဘူး။ အသီးအသီးကိုကျွမ်းကျင်စေသည်ထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်ထည့်ခြင်းအားဖြင့် ၊အသီး၊ပျားရည်နှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုတရာမျိုးကွဲနှင့်အတူတစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရသာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ရုရှားအတွက်၊ သစ်တော်သီးနှင့်အတူရေပန်းစားသည်၊အသီးကိုသီးတွင်ထား၏တစ်ဖွဲ့လုံးပုလင်း။ အစားအစာများအတွက် မုန်၊လိမ်းရန်၊ပူဝက်အူချောင်း၊နံ့သာမျိုးကို။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူကောင်းစွာဝင်ကင်အမဲသား၊ဝက်သား၊ကြက်သား၊ပဲ၊အာလူး၊ချိစ်နှင့်ပင်ငါး။ အရမက္ကဆီကန်အစဉ်အလာ၊သောက်ပြီးတစ်ပုလင်း၏သူတို့ရဲ့ခူ၏။ အသေကောင်သည်အညီအမျှအကြားအားလုံးသင်တန်းသားများ၏ပါတီကဆုိ၏လေးစားမှုကိုအများပြည်သူတို့အတွက်။ ခူမဲသားကိုပရိုတိန်းကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ပရိုတိန်း။ လို ။ ချစ်သူများသိတတ်စွာအတူထုံးနှင့်ဆား။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုဟုခေါ်သည်။ အလှည့်အတြင္း။။။။။"အများဆုံး ထုတ်လုပ်သူများ၏စောင့်ရှောက်မှုယူသူတို့ဖောက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဗူး၊အိတ်အဖြစ်နှင့်အတူအနီရောင်အမှုန့်ပါဝင်ဆား၊ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြေမွအခြောက်လှန်းအသေကောင်များ၏ကျိုင်းကောင်။ အနည်းငယ်ဆား၊လော၏နောက်ကျောအပေါ်လက်ကြားကိုလက်မနှင့် ။ ထို့နောက်အပိုင်းအထုံး(သံပုရာ)အယူနှင့်အတူဤ။ ပထမဦးဆုံးသင်လိုအပ်လျက်ဆားနှင့်အတူ၊ယူသောက်ပါရ နှင့်အစာကိုစားတဲ့အပိုင်းအထုံး၏။ အိမ်မှာ၊သင်န့်သတ်ချက်ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်နှင့်အတူအကြိုက်နံ့သာမျိုးကို။ ယူသောက်ပါရ မှိုက်၊ရွှဲရွှဲနှင့်အတူရေ။ တစ်ဦးချွန်ထက်အရောအနှောကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်လောင်လည်ချောင်း။ စွဲလမ်းမှအရသာအတူမူရင်း ၊သင်လုံးဝဆုံးရှုံး။ အခါပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်နှင့်ဤထူးခြားသောအရက်အဖျော်ယမအကြံပြုလိုတယ်၊သင်ကြိုးစားအားလုံးသုံးနည်းလမ်းများ။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်ကျိန်းသေအယူခံ။ ချစ်သောသုံးစွဲသူများ၊သင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးထားခဲ့သို့မဟုတ်တစ်ဦးကမှတ်ချက်စတင်ခြင်းကနေတနင်္လာနေ့။ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုဟာပြဿနာဖြေရှင်းပြီးရင်ဖိုရမ်(အကျင့်အမှုအတွက်ပုံမှန်ည့္ခ) ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေး။ ကောင်းသောတနင်္ဂနွေ။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိလိင်ချိန်းတွေ့အလုပ်လုပ်တယ်၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အဆင့်မြင့်ရှာကြောင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်၊အကျိုးစီးပွား၊လူမှုအဆင့်အတန်း၊နှင့်ပိုပြီး။ ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စစ္တမ္းကလိင်ဆက်ဆံရေးကို၊ဒါကြောင့်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အတိအကျကိုက်ညီနှင့်အတူလိင်တူသူလူများမျှဝေသင့်ရဲ့တန်ဖိုးများ။ သင့်ရဲ့ရလဒ်များကိုမြင်နိုင်၏ကိုယ္ေ။ ကျနော်တို့လည်းတစ်စိတ်ကူးလိင်ချိန်းတွေ့မိုဘိုင်းအက်ပ်ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့အတွက်နှစ်ဦးစလုံး။
တစ်ဦးချစ်စရာအနက်ရောင်ဆံရှင်နှင့်အတူအစေးကို-အနက်ရောင်မျက်လုံးမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းယောက်ျား၏အိပ်မက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရလှ၏နှလုံးပြသ၊တစ်ဦးကြီးများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သည်းခံခြင်း။ ဒါပေမဲ့ရလဒ်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်။ ညဦးတိုင်း၊မသာအပူမုန့်ညက်သင့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်၊ဒါပေမယ့်လည်းအညီအမျှအသည်းအသန်နမ်း။ ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်လှည်း၊အောင်နိုင်အပြီးပြည့်စုံသော။ ထို့နောက်နိမိတ်လက္ခဏာတက်မှာ ဆိုဒ္လိပ္စာ ပြင်ဆင်ထားရန်။ အသီးအသီးအသုံးပြုသူ၏ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ကိုယ်ရေးစာမျက်နှာအမြင်နှင့်မှတ်ချက်၊ဓါတ်ပုံပေါ်ပေးပြီးလက်ခံခြင်းဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်ကိုက်ညီတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချက်တင်။ တက်ကြွတဲ့ဖြစ်အသစ်ဖြစ်စေလျက်၊အသိအကျွမ်းနှင့်ဆက်ဆံမည်ဖြစ်သိမ်းပိုက်။
ရှိကြီးထွားလာသောဝယ်လိုအားအတွက်အရွယ်ရောက်အတွက်။ ဒီစေခြင်းငှါအဘို့လုံလောက်တဲ့ဟိုတယ်ရိုးရှင်းစွာလက်မခံကြဘူးအသေးစားကလေးများအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တိတ်ဆိတ်သောအတွက်သူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များ။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်အနေအထားအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့။ ဒါပေမယ့်အကယ်၍သာအစိုးရစနစ်၊ထို့နောက်သင်သည်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်မဆိုထူးခြားဆန်းပြား:၊အစဉ်အလာသို့မဟုတ်လိင်တူစုံတွဲများ၊'ကုမ္ပဏီ၊ဂိမ်းပရိသတ်များ၊အသီးသီး၊နှင့်ကလပ်ကာတွန်းမည်ဖြစ်၏ပုံစံအတွက်ဆှပြိုင်ပွဲ၊ဆိပ္ပါတီနှင့်အတူ နှင့်စိတ်ကူးယဉ်အတွက်၊ဖက်ရှင်ကိုပြသ၊အတွင်းခံနှင့်"ကစားစရာအရုပ်"အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့နှင့်အများအပြားအခြားသူများအဘယ်သူသည်ဒီေတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။"အရွယ်ရောက်ပြီး"ပွဲ၊ပြိုင်ပွဲတိုးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြိုးစားနေ၊အသီးအသီးအခြားကျော်အတွက်ပိုပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေထားဖောက်သည်များအတွက်။ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းများနှင့်အတူ။ အယူအဆ"၏အစောပိုင်းအအွန်လိုင်း"မကြာခဏသင်ရနိုင်အထူးေစ်းႏႈန္းခြောက်လအတွင်း။ အရောင်းနှင့်စာရင်းများကမ်းလှမ်းဤအပိုင်း လက်တွေ့ပျက်ကွက်။ ပြည်တွင်းခရီးသွားအေဂျင်စီ၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်အများအားဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရမှာအလွန်မှဆန့်ကျင်။ ဆဲလျှင်၊ဖောက်သည်မှလိုလား၊အဘယ်ကြောင့်မအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မိမိတို့ကိုဆက်ကပ်? သူတို့ပြောသကဲ့သို့၊ဆိုငျအသင်တို့ငွေကိုအဘို့။ အဖြစ်အပူပေးစက်၊အမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည့်အရေအတွက်အပေါ်အခြေခံကာရစ်ဘီယံကျွန်းစု-ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အသည်းအသန်လာေလာသောသူအဘို့တစ်ချိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးသံတမန်၊ဗန် ၊စမ်းသပ်ရှစ်င္ငံတကာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီး၊သူ့အတွေ့အကြုံ၊ဒီပြင်ဆင်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ အဆိုပါစကားလုံးအတွက်ဂရိကိုဆိုလိုသည်"အပျော်အပါးအပျော်အပါး"။ ဤသည်အဆိုပါကျင့်ဝတ်ဝါသောပျော်ရွှင်မှုသည်အမြင့်ဆုံးအကောင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အသက်တာ၏။ တဖန်၊ဒါဟာတကမ္ဘာလုံးအတွက်"လူ"ေဂ်ေ။ တည်ဆောက်ဖို့ဒီနေ့ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှယာ၏တာပါ။ ငါဝေ ၊နှင့်အကြောင်းကိုကောင်းထက်တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးပြုရာဤသည်နေ့ရက်ကာလသည်အပန်းဖြေစခန်း။ နေသော်လည်းအဆင့်"လူ"၊ကြယ်၊ တစ်လျောက်ပတ်သောဟိုတယ်နှင့်ကောင်းတစ်စု၏ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဘို့"အရွယ်ရောက်ပြီးသူ"။ ဒီနေရာမှာသူတို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာအနားယူရန်အဝတ်၊မြစ်ရေအရက်၏၊ဧည့်သည်ရှိသည်နိုင်လိင်အတွက်အများပြည်သူနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုပြီးနှစ်ခုကျော်ကလူအတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို။ ပေါ်မူတည်မဟုတ်ဘူး၊တစ်အားလပ်ရက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအချိန်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အဘို့အ"အရိုင်းအမျိုးသမီးရဲ့အပတ်က"သို့မဟုတ်"အပျော်အပါးရာသီ"။ ဟိုတယ်သို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဇုန်-"ကျိုးနွံ"နှင့်"အဝတ်အချည်းစည်း"။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌၊ဧည့်ရမယ်တက်ဆင်၊ထိုသို့အားဖြင့်အသုံးပြုသူတွေကိုရွေးကြပြီအ"အရွယ်ရောက်ပြီးသူ"ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအားလပ်ရက်အပေါ်ချင်မှရှိကယ်ဆယ်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက်အားလုံးအခါသမယ။ သို့သော်၊ထိုသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်ကြောင်းအများစု၏တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေကအမေရိကန်မှာအများပြည်သူ၏အသက်အရွယ်ငါးဆယ်၊နှင့်မော်ဒယ်။ များစွာသောဒိုယောက်ျားနီးပါးတရားဝင်ရှိရည်းစား၊နှင့်၎င်းတို့၏ဇနီးပြီ။ အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုမမြင်ဖြစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတစ်ခုခု၊ဒါပေမယ့်အဖြစ်အလွန်သည်းခံသဘောထား။ ခြင်းများအတွက်၊သင်တန်း၏၊-ကက်သလစ်နိုင်ငံ။ ၏အများဆုံးဟိုတယ်များဆက်ကပ်ကြောင်းအရွယ်ရောက်ပြီးကျန်၊လိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါရွယ်ရောက်ပြီးသူစုံတွဲများကိုဘဲသားသမီးမပူဇော်အထူးအလေးပေးအ"အရွယ်ရောက်ပြီးသူ"ဆှ။ တစ်ခုတည်းသောဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးသောအ နှင့်အတူနှစ်ဆယ်နေ့ကန့်သတ်သည်တည်ရှိ၏မြောက်အတ္တလန္တိတ်ကမ်းအပြည်၊နီးပေး။ကဟုခေါ်သည်နှင့်အခြေခံအပေါ်အပေါင်းတို့သည်-အားလုံးပါဝင်။ ဤအပြည့်အဝလစ်စလစ်အားလပ်ရက်ရှုပ်ထွေးသောလည်းအထူးအပတ်ကေ'အုပ်စုနှင့်"စုံတွဲများ"။ တွင်အဆိုပါဟိုတယ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်၊ကြီးမားတဲ့စာရင်း"အ"အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့အဖျြောသင့်ရဲ့အရသာနှင့်အတူ။ ကြားထဲအပန်းဖြေ၊"အရွယ်ရောက်ပြီး"အခွင့်အလမ်းဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအပြည့်အဝကိုယ်စားပြုမက္ကစီကိုအတွက်ပေါ်အ ။ နှင့်ဤအကျိုးကြောင့်၊အဓိကခရီးဥပဒေတွင် နှင့်လှည့်ဖျားယာသတင္း။ အများစုဒေသခံကမ္ဘာအဝှမ်းခရီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်ခရီးမေရိကန်နိုင်ငံ(ည)နှင့်ရှင်းလင်းစွာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေ၊အပါအဝင်အပေါ်အ"အရွယ်ရောက်ပြီးသူ"အားလပ်ရက်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊အများအပြားမိသားစု-ပွေးအတွက်ဟိုတယ် ပြီပိတ် စီစဉ်ထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်လုပ်၊ထို့နောက်ပွင့်လင်းအဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးကလပ်အသင်းသို့မဟုတ်အစည်းအသစ်တစ်ခု"အရွယ်ရောက်ပြီးသူ"ဇုန္၊ပိတ်အပေါ်သူတို့ရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေနှင့်အတူ၊ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အထူး။ အတူလိုက်ပါ၊သူတို့ငါတို့သည်ဖန်ဆင်းအမှတ်တရများအတွက်ခရီး၊အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြေမွအ"အရွယ်ရောက်ပြီး"ဟိုတယ်သို့အမျိုးမျိုးသောပစ်မှတ်အုပ်စုများ။ ဌာနခွဲအတော်လေးလုံးေ၊သို့သော်ရောင်ပြန်ဟပ်လက်ရှိအဆင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးယနေ့။ ၏သင်တန်း၊ဒီပြီးပြည့်စုံစာရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခု"အရွယ်ရောက်ပြီးအားလပ်ရက်"အတွက်ကာရစ်ဘီယံ။ ဒါပေမယ့်ခြုံငုံရုပ်ပုံလွှာကြောင်းပြပြီ။ မကြောက်ကြမှတ်ချက်နှင့်တွေ့ရှအသစ်အမျိုးအစားများ။ တားမြစ်ထားသောအသီးကိုအမြဲချို၊အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအီး-လယ္ေရယူလက်မှတ်မ။ ၏အမှု၌တေသို့မဟုတ်ကိုးကားတဲ့လင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်။.
မက္ကစီကို၊တရားဝင်တစ်ပြည်နယ်၏အမေရိကန်မက္ကဆီကိုပြည်ထောင်စုတွင်မြောက်အမေရိက၊မိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်မြောက်ကိုရီးယားမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊အရှေ့တောင်ကလီဇ်နှင့်ဂွာတီမာလာနိုင်ငံ၊အနောက်ဘက်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပင်လယ်ကွေ့နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊အရှေ့ဘက်မှအားဖြင့်အဆိုပါရေများ၏မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်။ လူဦးရေ၏မက္ကခဲ့သလဲ။ ၏မြို့တော်မက္ကဆီကိုသည်မက္ကစီကိုစီးတီး။ မက္ကစီကိုတရားဝင်အမည်မှာပြည်နယ်၏အမေရိကန်မက္ကဆီကိုပြည်ထောင်စုတွင်မြောက်အမေရိက၊ပေါ်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်နှင့်အတူအမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊တောင်ဘက်-အရှေ့နှင့်အတူလီဇ်နှင့်ဂွာအပေါ်အနောက်နိုင်ငံများကကယ်လီဖိုးနီးယားပင်လယ်ကွေ့နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊အရှေ့အရပ်အားဖြင့်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်။ လူဦးရေ၏မက္ကခဲ့သလဲ။ ၏မြို့တော်မက္ကဆီကိုသည်မက္ကစီကိုစီးတီး။
အစဉ်အလာသည်အားလုံးထက်ထက်အခြားတစ်ကမ္ဘာအတွက်၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်ထိန်းသိမ်းရန်အချို့စိတ်ဝင်စားဖို့အလေ့အကျင့်။ လူဆိုသူအမှန်တကယ်ယုံကြည်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာ၊ဒါပေမယ့်နေဆဲယုံကြည်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဝတ်ဆင်သေးငယ်တဲ့အနီရောင်ဖဲကြိုးသို့မဟုတ်ရႊပါရသူတို့ရဲ့ခံလည်းမရှိသည့်အခါတိုင်းနေကြတ်၊အ ကာကွယ်သူတို့ရဲ့သောကလေး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အမျိုးသမီးလေ့ရှိသည်တစ်ခုပိုလျှံ၏စတော့ရှယ်ယာမှာအနီနဲ့အဝါရောင်အခံ၊ရောင်ပြန်ဟပ်သောသူတို့၏အလိုဆန္ဒများအတွက်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သို့မဟုတ်ငွေရှာဘို့အသစ်ကူး(လိုအပ်ပါကအဖြစ် ချက်များ)။ နှင့်သောသူတို့အားရှိပါတယ်ဝယ်ထားတဲ့ပုံသို့မဟုတ်အကြံပေးခြင်း၊။ သံအ ၊တင်ပလ္လင်နှင့်အတူယောင်းနှင့်လှည့်သည်အထိဇောက်ထိုးတစ်အံ့ဖွယ်ဖြစ်လာ၊နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ဟုတ်ကဲ့၊တကယ်တော့၊ခိုးယူငွေမှစိန့်။ ထိုဆိုင်များကရက်စက်မှုဒဏ်ရာအပြင်း၏မိခင်မိခင်ကျိန်းသေအတွင်းအသီးအသီးကျွန်တော်တို့ကို၊ဒါပေမယ့်ဒီအကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိသည်မဟုတ်နိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့နှင့်အတူလူ။ တကယ်တော့မက္ကဆီကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအားကြီးသောနှောင်ကြိုးနှင့်အတူသူတို့၏မိခင်များနှင့်မိသားစုများ၊ဒါပေမယ့်အကြားဆက်ဆံရေးသူတို့သားနှင့်သမီးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အကြားဆက်ဆံရေးအမေနှင့်သမီးလှုံ့ဆျောနှင့်ဆွေမျိုးငြိမ်ဝပ်နှင့်အကြားအကြွင်းမဲ့ချစ်ခြင်းနှင့်အကြွင်းမဲ့မုန်းပါ။ အနီးကပ်သူတို့ရ၊အကောင်းဤအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်လာ၊နှင့်အတော်လေးဘုံကအနက်ကိုဘော်တို့၏မိမိတို့ကွန်အပေါ်အခြေခံသတ္ရွိပါတယ္။ စဉ်းစားသူတို့ကိုသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ၊သူတစ်ခါတစ်ရံကြောက်ကြနှင့်သိသာထင်ရှားသောသူငယ် နားလည်မှုလွဲ။ မျှမရှိသည်သာတည်း၏ပုံစံဘယ်လောက်မိတ်ကပ်မက္က၏။ တစ်ခုခုအကြားတစ်ဦးအနိမ့်အဓိကသော့ချက်နှင့်အလယ်အလတ်၊ဒါပေမယ့်ပင်အ စတိုင်ဘုံဖြစ်ပါသည်အပေါ်နံနက်ယံတုိင္ပင္ျ။ အဲဒီအမျိုးသမီးများအတွက်ဘုံဖြစ်ပါသည်၊သူတို့ရဲ့မိတ်ကပ်အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ။ အလိမ္မာသုံး၏တစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်း၏အမျက်ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖို့အံ့သြဖွယ်မှစွမ်းရည်ကိုဆွဲပြီးပြည့်စုံလိုင်းပ်ာ္ၾအတွင်းဆိုင်ကယ်ဘတ်စ်ကားစီးပြီး၊မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးမသိ။ ငါသည်လည်းချင်ပါတယ်ပါကသည်းခံသောမိန်းမတို့၏အလှည့်သူတို့ကိုအသီးအသီးသို့တစ်ဦးအသေးလက်ရာပင်လျှင်အများဆုံးကိစ္စများတွင်သူတို့လှည့်ထွက်ကြည့်ဖို့လိုသေးသေးလေးမင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်။ ငါမရည်ညွှန်းပြီးဒီပြဿနာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိသည်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အရေးအသား။ မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများမှာအကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါမူလစာမျက်နှာကုစား:သံပုရာသို့မဟုတ်ကော်ဖီ၊ပျားရည်အေးမိများအတွက်၊ လက်ဖက်ရည်အဘို့အသက်သာအစာအိမ်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်မြှင့်တင်အိပ်၊ပူပန်များအတွက်အေးဆေးအာရုံကြောများ၊နှင့်အနည်းငယ်သာရှားစောင်းလက်ပတ်အခြားအရာအားလုံး။ ဘာမှမဖယ္ရွားျ၏တန်ခိုးလက်ဖက်ရည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကုစား ရေကို'။ သူတို့ကအစနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်၏အမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကိုယ်အလေးချိန်အစီအစဉ်များ။ လစားအစာ၊ကျွဲသောက်ခြင်း၊အပန်းသီးအစားအသောက်၊အနေအစားအစာ-အကြောင်း၏အမည်အချိန်ပမာဏအပေါ်အစားအသောက်သူတို့ဖြစ်နိုင်။ ပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာပိုပြီးချစ်ခင်၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊မေတ္တာရှင်အမျိုးသမီးများကကမ္ဘာအနှံ့။ ရှိသည်သောသူတို့အားသို့မဟုတ်ရှိမက္ကရည်းစားသိမိမိတို့၏ချစ်နိုင်ကျပ်၊အရာကယ့်ကိုအကောင်း။ လာ၊မလိုလားဘူးသူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းတူ အားဖြင့်မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်စုံမက်? မက္ကမိန်းကလေးငယ်များအပေါင်းတို့သည်ဂုဏ်မည်သူမဆိုလိုအပ်ရင်၊သင်တန်း၊သူတို့မှာအရူး။ စိတ်အားထက်သန်သည်အခြားအမြန်၊အနိမ့်အဓိကသော့ချက်လမ်းအပြောတယ်။ တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း၊သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်ရှိသောမှောင်မိုက်ဘက်ခြမ်းနောက်ကွယ်မှလှပသောမျက်လုံးများ။ လျှင်မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခြေခံပြီးတဦးတည်းစကားလုံးစကားလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါဖြစ်၏ဖော်ရွေမှု၊လူပေါင်းကောင်းသော၊ဆူညံနဲ့အမြဲတမ်းအတွက်စိတ်ကောင်းပျော်စရာ။ မိန်းကလေးများအတွက်မက္ကကခုန်ညဉ့်လုံး လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းမှတဆင့်၊အကောင့်သို့ယူအကျယ်ပြန့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ မရဘူးမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများအတွက်ဤသူအပေါင်းတို့တာပါ၊ဒါပေမဲ့သူတို့မျှဝေအများကြီးအပြစ်အချို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အလေ့အကျင့်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဖြစ်ခြင်း၊သွားဖို့အဆင်သင့်အပေါ်ထွက်လမ္းနှင့်မှန်ကန်အခွင့်အလမ်း။ အခါမက္ကဆီကန်မိန်းကလေးေျပာသူမသည်ဒဏ်ငွေင့်၊သူမကကိုယ့်ကိုအသိအမှတ်ပြုသူမ၏သည်းခံ။ လျှင်မဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူမ၏ဖိနပ်အပေါ်များမှာ၊သို့မဟုတ်လျှင်မဖြစ်တက်ခူး၊သူမ၏စံနှုန်းအိတ္၊သူမဝေးအဆင်သင့်ထံမှသည္။ မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများအသိအမှတ်ပြုအတွက်သူတို့၏အားကြီးသောစိတ်ထားနှင့် ။ ၌နေထိုင်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူခိုင်မာသောကျားမဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိပါတယ်လွှမ်းမိုးဇာတ်ကောင်များ၏မက္ကနေသောအမျိုးသမီးရိမ္မႈမကြောက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်၊နှင့်ဤအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုသင်ချင်ကြဘူးတစ်မက္ကဆီကန်မိန်းကလေးဖြစ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်၊ဒါဟာအဆန်းမဟုတ်ပါကြားအမျိုးသားများအကြောင်းပြောသူတို့သိဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူဘာမျှမ။ သို့သော်အမှန်တကယ်၊ဒါကြောင့်စဉ်းစားပါ။ ကလပ်အသင်းများအားဖြင့်လိုက်အောင်လူငယ်လူရွယ်အိမ်တော်၌သုံးဖြုန်းဖို့ပိုက်ဆံနှင့်အသက်။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်အများကြီးအရက်၊နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆေးဝါးများအကြောင်း၊သူတို့ပင်ကြောက်လန့်ဖြတ်ကူးဖို့အခုံ ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်း။ ၏သင်တန်း၊ဒီအနေရာတိုင်း၊ဒါပေမယ့်အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊တစ်ချိန်ကတစ်ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ယောက်ျားသွားရန်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊အနေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုံလောက်သည်။ အဲလည်းအများကြီးလိမ်လည်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အအာမခံချက်၏နေ့စွဲ၏မွေးဖွားအတွက်မိန်းကလေးဓာတ်ပုံ၊နှင့်အငယ်၏မိခင်လေးသူယောက်ျားလေးများအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းတပ်မတော်များအတွက်သုံးနှစ်၊ကလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာ? အဲဒီရဲ့သာရန္ျမယ္။ ဒါဟာအတွက်အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်။ ဒါကြောင့်အတူအစည်းအဝေးမှာမိန်းကလေးလမ္း။ မဟုတ်ရှိသမျှလူဆုံးဖြတ်သွားဖို့အတွက်လူတစ်ဦးလျှင်သူသည်အလျင်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းလမ်းလျှောက်မာနထောင်လွှားနှင့်အတူ။ အမှုများစွာအတွက်၊ဒီအဖြစ်ကြောင့်အကောင်းလိင်သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းပယ်ခံစားနေရတယ်။ မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားဖို့လုံလောက်ပါတယ်ပိတ်ဆို့အများစု၏ဆန္ဒဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်အစည်းအဝေးမှာမိန်းကလေးလမ္းကကိုကျော်လွှားရန်အသင့်ဝှက်ထား၏ကွောကျရှံ့။ သည်းမခံကြဘူးမှငြင်းပယ်။ ဒါဟာအတော်လေးဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်သတိပြုမိကြပြီအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ပြီးသားတဦးတည်းရှိတယ် လူကြီးလူကောင်း။ စဉ်းစားစသောတကယ်တော့ဒီနေ့ရဲ့အကြောက်လန့်၏စိတ်ဝင်စားနေသောအမျိုးသားများအတွက်ဒီနေ့ရဲ့အကြမ်းမဖက်။ သို့သော်အဘယ်အရာဆိုရင်မကောင်းကြံ? ထို့ကြောင့်ပေးထားသောဤရိုးရှင်းတဲ့အခြေအနေ။ နားလည်ရန်မည်သို့ဖြည့်ဆည်းဖို့မိန်းကလေးများလမ်းမကြီးပေါ်တွင်၊အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အကဲဖြတ်၊သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်။ ဒါဟာရမည်ဖြစ်ပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်။ သင့်ရဲ့ဖိနပ်။ အလွန်မကြာခဏအမျိုးသားများအငြင်းဒီကွက်၊ဒါပေမယ့်အချည်းနှီး။ တစ်ခါတစ်ရံညစ်ညမ်းသော၊မစင်ကြယ်သောဖိနပ်နိုငျခြောက်လှအမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်ပင်၊ဒါကြောင့်တကယ်တူလှပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအကြိုက် ။ မမြဲကြဖို့လမ်းပေါ်ဆင်းလမ်းလျှောက်အတွက်ဝတ်စုံ။ ကိုယ့်မှာကောင်းတစ်ဦးကိုကြည့်ယူပတ်ဝန်းကျင်။ ငါသည်မပြုဖို့ဘယ်လိုသိအပေါ်အလမ္း။ တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသင်ထင်ထက်။ သင်ဟာကိုယ့်ရန်လိုအပ်သည်ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်မှု။ အတိုးချက်ချင်းမြင်နိုင်။ ဒါေပမယ့္အ ဖို့ကြိုးစားနေသည်ထိုသို့ဖယ်ရှားပစ်ရရန်အလျင်အမြန်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများ၊နှစ်သက်ဖို့တိတ်ဆိတ်စွာနေကြအကြောင်းအရာအားလုံးနှင့်မတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်အဖြေသူတို့မိန့်ခွန်းကိုတစ်ဦးတည်းကနေထွက်ခွာ။ ခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး လွှမ်းမိုး၊အဘယ်သူမျှမလေးမြတ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ မဆိုအမှု၌၊ကြိုးစားဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမိန်းကလေးတစ်ဦး။ မူရင်းကတိုက်တွန်း၊ဒါပေမယ့်မတင်ကပ်။ အစဉ်အမြဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်အပြင်ဘက်မှ။ ဒီစေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူနားလည်ရန်အဘယ်သို့ပြောသောအခါ၊ဒါကြောင့်အတိုင်းမမောင်းခြင်း။ နောက်တဖန်အောက်မေ့၊သင်ကားလမ်းပေါ်မှာတဲ့အမကြာသေးမီကာလ၌ဖြစ်ယူဆနေကြတယ်အလွန်သတိထား။ အဆိုပါစံပြရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီ။ အယူကိုစွန့်ပစ်ရာ၊သို့သွားကွက်၊ကျေးတံခါးကိုဖွင့်လှစ်။ သင်သည်လည်းအကြံပြုတင်ဆောင်လာသောလေးလံအိတ်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာအလမ်းပေးစေခြင်းငှါအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအခြေကိုရှာဖွေရလွယ်ကူသည်၊နှင့်ဤအရေးမသင်္ကာလျှင်သာကမိန်းကလေး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ ပြုမူမြဲဆွဲဆောင်ကောင်းလိင်။ အဲဒါအနည်းငယ်တကယ်ကောင်းဤသည်နေ့ရက်ကာလ။ ကျွန်တော်ပါမှအဖြေကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုအတွင်အလမ္း။ သူတို့အလေး။ သက်သေအကြံဉာဏ်ကို:ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုသာယာသောကိုချီးမွမ်းအမျိုးသမီး။ ဒါပေမယ့်သတိရ၊သာမကောင်းတဲ့။ အဘယ်သူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အဘို့အရှာဖွေနေသင်အခုအချိန်မှာ၊ ကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်အခက်ခဲရှိနေပါတယ်။ ရုံမင်နှင့်စွဲ။ တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်၊နှင့်မိန်းကလေးများမကြိုးစားအာရုံစိုက်ဖို့သူတို့ကို။ ဒါကြောင့်သင်သည်မပြုလျှင်သိရန်မည်သို့အပေါ်အလမ္း၊သဘာဝကျကျပြုမူနှင့်အငြိ။ လက်ျာစကားအဖြစ်ကျိန်းသေကိုယ်သူတို့ဒေါသ။ နှင့်အပြုံးများ၊အမျိုးသား၊အၿပံဳး။ ဒါဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
သူအမျိုးသမီးဈေးသွားခေါ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေပြီးနောက်ယောက်ျားအောက်မှသူမ တြက္။ တစ်ချိန်ချိန်၊သူမကပြောပါတယ်၊ထိုလူကိုထား၏ဆဲလ်ဖုန်းအတွက်အမှိုက်ပုံးလုပ်နိုင်ကြမ်းပြင်နှင့်တွန်းသူကသူမ၏မျက်နှာသို့၊အဆိုအကအစီရင်ခံအစွမ်းအကြိမ်-ချော။"သူမသည်မကြာမီသတိပြုမိသည်သူ့အပေါ်အထပ္၊လွည္းအတူ-ဖုန်းကင်မရာထိုး၊ေစကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြ၏ရုပ်ပုံသူမ၏လက်အောက်တွင်သူမ၏အင်္ကျီ၊"ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ။ အဆိုပါသံသယဟာလူဖြူအမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက်သူ့လေးဆယ်။ ရရဲသူရငါးပေမှရှစ်လေးနှစ်ရာပေါင်။ သူသည်မီးခိုးရောင်ဆံပင်များနှင့်ပျော့ပျောင်းကာကီေဘာင္းဘီတုိနှင့်အပြာရောင်စင္ေသူကပြောပါတယ်"။ ရိရဲ့။"ရဲတ၏ဓါတ္ပံုကိုသံသယအတွက်မျှော်လင့်ချက်အကြောင်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာထင်ရှားစေနိုင်တယ်၊အစီရင်ခံတုန်း။ သူတောင်းဆိုနေတာမည်သူမဆိုနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်ခေါ်စာမျက်နှာများရဲ-သို့မဟုတ်အ ။
ဆက်လက်တည်ထောင်ရန်ရုရှားစကားပြောပုဂ္ဂိုလ်များ၏လယ်ပြင်တွင်အာမခံ:ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံကားကိုအာမခံ၏အသက်တာနှင့်ကျန်းမာရေး၊ငွေစုနှင့်ပင်စင်အာမခံ၊အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပကြသည်မှာတိုင်းဝပ်နှင့်အ J။ များအတွက်သင်တန်းသားများ:ဗီဇာ ၂၊၄၊၅၊၆၊အသက်အရွယ်မှ ၃၀ နှစ်မှ ၅၅ နှစ်၊အသိပညာ၏ကိုရီးယားဘာသာစကား၊အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလက်ဆောင်။ Hon။ Olga Alexandrovna ဟိုဘဏ်၏ရုရွားစကားကိုဆက်လက်ဆောင်၌ဥေရာနိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးကွက်စတင်နေန-ရုရှားဗဟိုဘဏ်၏ရုရွားစကားကိုထည့်သွင်းဖို့နောက်ထပ်ငွေကြေးအရောင်းပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးကွက်ကနေစတင်ပြီးအောက်တိုဘာလ ၁၊သင့်သောထောက်ခံအားကျသွား ruble။ ခင်တစ်ရက်၊အ ruble ပြသ အဆိုးဆုံး-အစဉ်အမြဲအနီးကပ်တစ်ရံနှင့်အတူယူရို၊ချိုးဖောက်၏အမှတ် ၉၂ ရူအတွက်တစ်ယူရိုနှင့်နီးခွဲ-နှစ်အကြုံအတွက်တစ်တွဲနှင့်အတူလႊတ္ေတာ္ကြောင့် aggravation၏ပထအန္တရာယ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ နေစဉ်သင့်ရဲ့ထိုမ်ဘူဖေးဆိုင်ကိုနေ့တိုင်း၊ဒါကြောင့်အရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနားလည်ရန်သင်ဝယ်ယူကြသည်မဟုတ်သာ၊ဒါပေမယ့်လည်းအစိတ်အပိုင်းကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ သင့်ကိုမဝယ်ကြသောအခါတစ်ဦးလယ်ယာ၊အိမ်၊သို့မဟုတ်၏အစိတ်အပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊သင်သွားဖို့ရှိပါတယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ယူများအတွက်အနည်းဆုံး ၁၀၂၀ သို့မဟုတ်အနှစ် ၃၀ စတဒေါင်။ အခါစျေးကွက်အကျရောက်၊သငျသညျရှိသည်ဖို့အခွင့်အဝယ်၏အစိတ်အပိုင်းကုမ္ပဏီများ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကြောင်းမှာဈေးနှုန်းများကိုလျှော့ချ။ သင်တို့သည်အလွန်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိကြသည်။ ။။။။ အမျိုးမျိုးသည်သန့်ရှင်းသော Grail၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အဲလက်စ်ဖြစ်ပါသည်သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်။ သင်တန်းများတွင်တိုးတက်တတ်မြောက်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအခြေခံအချက်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံင္ငံတကာတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များ။ ကနေသီအိုရီအလေ့အကျင့်။ မာက္ကိုးရီးယား၊အမေရိကန်၊ရုရှား၊ဂျပန်၊တရုတ်၊ဟောင်ကောင်၊ဗီယက်နမ်။ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကစားတဲ့သို့မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်၊လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏အိပ်မက်ကိုဖွင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု။ စာရင်းဇယားကြောင်းပြသသောသူတို့၏အစ၊၂၃ ပိတ်ထားကြသည်ပြီးနောက် ၃ နှစ်ပေါင်း၊နှင့်အခြားပြီးနောက် ၃ နှစ်၊၂၃၏ကျန်ရှိသောသူများပိတ်ထားကြသည်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်၊နောက် ၆ နှစ်ရှိနေပါသေး ၁၀ ပိုပြီးသို့မဟုတ်လျော့နည်းအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ဒီလူတွေအားလုံးပဲအိပ်မက်ဖြစ်လာ၏လုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်ပြီးသားအဆင်သင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့၊တစ်ဦးအပေါ်သိသိသာသာအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်စတင်ပြီးနှင့်ပြေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ ဒါပေမယ့်လည်းအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြိုဆိုကြောင်း၊ကိုးရီးယားအချစ်နေထိုင်၊အုပ်စုတစ်စုချင်သောသူတို့အဘို့ရှာတွေ့ဖို့အိပ်မက်ကိုမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ရုံပျော်စရာရှိသည်၊အင္ခ်ဳန္းမြို့၊Anshan၊နေ့၊ဆေ၊N။ ပူးပေါင်းတစ်ဦးအုပ်စုအသစ်၊ဒါကြောင့်အမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အမြင့်ဆုံးခုိက္ႏ၊စိတ်ရင်းမှန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှု၊ကြိုဆို
ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများ ၁၈ Wirth။
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊အမျိုးသားမသိခဲ့ရွာသဘောဆက်သွယ်ရေး။ ရှိပါတယ်လွန်းအများအပြားကြယ္ရာအတွက်ခေတ်မီလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းကျော်လွှားရန်ခက်ခဲ။ အစည်းအဝေးတွင်တစ်ဦးကဖီးသို့မဟုတ်ရထားစဉ်းစားသည်ထူးဆန်းမှာ discos သင်သာသူတို့အားခရီးဦးကြိုပြုဆယ်ကျော်သက်အဘယ်သူသည်အဆက်မပြတ်များ၏မိဘများ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အချို့လူမတှေ့နိုငျတစ်ဦးကမိန်းကလေးအတွက်ညဥ့်အခါကလပ်အသင်း၊ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောရှာကြာအချိန်နှင့်ငွေကို။ မတိုင်းလူသားသည်ငွေအလုံအလောက်ရောက်ဖို့ discos နှင့်အလားတူထူထောင်၊ဒါပေမယ့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူတိုင်းသည်လိုအနားယူရန်။ နှင့်ဤအစဉ်အမြဲအဆင်သင့်ကူညီဖို့လိင်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈၊ဘယ်မှာအမျိုးသားများကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့ချစ်စရာနှင့်မိန်းကလေးများ။ ချစ်စရာနှင့်ဖြေလျော့မိန်းကလေးများအစဉ်အမြဲအဆင်သင့်ဖျော်ဖြေဖို့၊အာရုံကနေႏပြင်ပကမ္ဘာ၏။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရုတ်တရက်ငြီးငွေ့၊သင်ရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းတစ်ဦးအချိန်၊ဂျာမန် Chatroulette ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ် အဆိုပါဧည့်သည်များ။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေခြားလူများနှင့်အတူ၊အဘယ်သူမျှမပြဿနာနှင့်အတူငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်ပျင်းစရာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ဒါပေမယ့်သာအဆုံးမဲ့။ သင်ရုံသွားတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပါ၏အရသာကိုအဖော်နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလား၏မေတ္တာ၊ကြင်နာမှုနှင့်နားလည်မှုဖွင့်လှစ်မီသင်။ ဖော်ရွေနှင့်အချို၊အညှို့၊ရိုးသားလန်းစိုပြေတဲ့ငါ-chatushka Russkaya ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အလှအတိုင်းအရသာသည်။ တိုင်းလူတွေ့လှအပအတွက်မိမိကိုမိမိအရသာခံရဖို့ရုံထိုကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေရေး။ ရုံအနည်းငယ်မိနစ်-နှင့်အခုတော့အမေ့အကြောင်းပြဿနာများ၊နေကွယ်ပျောက်ရရန်ပုံမှန်အတိုင်း၊ခက်ခဲပင်ပန်းနှင့်နှောင့်အယှက်။ ရိုးရှင်းသော၊လွယ်ကူရော၊လှသောစကားပြောဆိုချက်နှင့်လှပသောဓာတ်ပုံများသူနိုင်ဖျော်ဖြေဖို့မည်သူမဆို။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများအလျင်အမြန်စေပြီးမှဘုံ၏မေတ္တာ၊ကြင်နာမှု၊အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်သာယာသောအတွေ့ကြုံ။ အလှအဆင်သင့်နားထောင်ဖို့တစ်ခုမဆိုတောင်းဆိုမှုများရဲ၊နှင့်အတူသူ့ကိုများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့၊နှင့်ပင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကူအညီနှင့်အတူလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံဥာဏ်ပါ။ ပြီးထိုသို့သောသာယာသောအချိန်၊မည်သည့်အလုပ်နှင့် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုပုံကဲ့သို့လွယ်ကူသော။ အပျင်းစရာကောင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အညှိုးတနင်္ဂနွေများအတွက်သင်အမြဲအတိတ်၏အရာ၊ကိုယ့်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်တခါသင့်အသက်တာလိမ့်မည်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်း။ ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ နှစ်နှင့်အဟောင်းတွေ၊ဒါကြောင့်သင်အနေနဲ့ထူထောင်ကွန်နှင့်အတူလူငယ်အမျိုးသမီးသည်သူကောင်းစွာသိ၏အမ်ိဳးသားအလိုဆန္ဒ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မိန်းကလေးများနှင့်အတူသိမ်မွေ့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသင်မျှဝေဖို့တစ်ဘုံဘာသာစကားနှင့်အတူလူ။ ကအထီးကျန်နေတဲ့အခါကိုယ့်အနေနဲ့လစ္၊သရအပေါ်လိင်ချက်တင်ကစားတဲ့။ သင်ရုံသွားဖို့ဆိုက်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါရှာ-ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ဇင်နှင့်ချီ၏အမည်မသိ။ အသီးအသီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကို၊အကျိုးစီးပွားနှင့်စိတ်ကြိုက်စူးစမ်းဖို့။ ဒီရှာဖွေခြင်းသင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုဖော်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ရှာဖွေနေများအတွက်အချစ်တဦးတည်းအတူအချိန်ဖြုန်းဖို့။ ထိုအခါမူကားသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာနာရီအဘို့၊အကြောင်းကိုမေ့သင့်ပြဿနာများနှင့်အခက်အခဲအသက်တာ၏။ ချစ်စရာနှင့် girlish သိပ္အေထာက္အ၊ သိကောင်းစရာများနှင့်အပြန်အလှန်စာနာဖျော်ဖြေဆှကခုန်မွေ့လျော်မည်ကိုသင်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်အချိန်နှင့်ထည့်နှင့်အတူအသစ်၊အတွေးအပြုသဘော။
သာပထမတစ်ချက်မှာပုံရတဲ့လူတွေကမပြောင်းဘူး။ ဟုတ်ကဲ့၊မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ထဲက၏အမြင်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သောသူတို့အယှက်ပြီအတူတူပြဿနာကို၊ကျွန်တော်တို့ဟာအလားတူအမှားတွေပြီး၊တကယ်တော့အတွက်၊တူညီသောအရာ-အပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပနွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်သည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုအပ်ကောင်းတစ်ဦးကိုအလုပ်၊အပြည့်အဝ-အချိန်အိမ်မှာ၊နှင့်ကြီးမားတဲ့၊မင်္ဂလာရှိ၊နှင့်ကျန်းမာသောမိသားစု။ ကောင်းပြီ၊ဤအရေးစနစ်၏တန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်လို့အမှန်တကယ်ချစ်လူတို့နှင့်အခွင့်ပြုပါရန် တစ်စုံတစ်ခုကိုသင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်အချိန်အနည်းငယ်အဘို့အကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနည်း၊ချစ်ဖို့၊နေဖို့နှင့်ပျော်ရွှင်စေကြောင်းအရာအားလုံးကိုထွက်လှည့်။ တချိန်တည်းမှာ၊သင်နားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတိုင်းမျိုးဆက်အမမရှိဘဲ၎င်း၏။ ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးအဘွားအရှုးဖြစ်၏အကြောင်းကိုအိမ်အကြောင်းသူနှင့်အစည်းများ၏အနီးကပ်နဲ့ဝေးကွာသောဆွေမျိုးသားချင်းများလျှင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်နှင့်အဖေလုပ်ခဲ့တဲ့၊gravitated ကိုခရီးနင်းပြီးခရီးစဉ်ကိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ခုံတွေကစပြီး၊ထို့နောက်အကြှနျုပျတို့သညျ၊ထိုင်မှာကျောက်ပြားကို၏ပထမဦးဆုံးနှင့်အတူအပြင်ဘက်ကမ္ဘာမှာဒုတိယအကုမ္ပဏီများကိုပိုပြီးချင်တယ်-ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့အရာအားလုံး။ တစ်စုံတစ်ဦးကအချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များအကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးလက်မှာကိုယ့်အတူတူကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ပုံမှန်သောမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခွင့်ပေးထားလောကဓာတ်လုံးမှ။ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ တိုက်ရိုက်နှင့်ခွင့်ပြုဖို့အလုပ်အတုကမ္ဘာအဝှမ်းခရီး။ အခါတိုင်းသင်ကျပန်းပြောင်းရန်ကမ်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အဆင်းလှသောလိင်၊သင်ပြပါသာလူ၊ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်:နေ့စဉ်ဘဝ၊ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာစကား။ အားလုံးတူဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈၊ချက်တင်ကစားတဲ့ ထိုသို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်နာရီဝန်းကျင်နှင့်ထုတ်လွှင့်ပုံရိပ်တွေကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အရှိ၊ထိထိရောက်ရောက်ရင္က်ပ္ေသာအသုံးပြုသူရဲ့အသွင်အပြင်နှင့်အသံ၊ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါ။ ယခုအခါအင်တာနက်သည်လက်တွေ့ကျကျ၊လေထုထဲတွင်တက်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်နိုင်ဖြစ်ဖွင့်လှစ်မဆိုကနေစျေးဝယ်စင်တာ၊ဖီးသို့မဟုတ်ကမ်းခြေမှာ:ငါတို့သည်နောက်တဖန်န့်သတ်အာကာသအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး။ အတူတူပါပဲနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ရှိသည်ပါဘူးမည်သည့်အခက်ကန့်သတ်မှာအားလုံး၊အဘို့အမှလွဲ။၏အသက်အရွယ်အကသင်တန်းသားများအဖို့ဆန္ဒပြောကျေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ ပါကစကြာအကောင့်သို့ထူးခြား၏အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်၊နှင့်စကားအကောက်အတွက်ဥပမာ၊အဂၤလိပ္၊ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမမည်သဘောနှင့်အတူရိုင်းစိုင်းဖြစ်ခြင်း၊နိုင်ငံခြားရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိရုရှ။ အဝင်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်၊အတိအမြင်နှစ်ခုစလုံး၏လေထု၏အခန်းပေါင်းနှင့်အစဉ်စောင့်ရှောက်သောအားဖြင့်သင့်အိမ်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့။ တခါတရံဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်၊တခါတလေမသိပ်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌၊ဒါကြောင့် ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်အလျင်အမြန်ထွက်ပေါက်ကိုချက်တင်အားဖြင့်စတင်ကာအဘို့အရှာအသစ်ဖော်။ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မိန်းကလေးတွေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမနှောင့်အယှက်လိမ့်မည်သင်သွားနေတယ်ဆိုရင်သင်သာဗမာ။ သဘောတူသည်၊တစ်ခါတစ်ရံဤသည်အဆင်ပြေလျှင်မိန်းကလေးအရမ်းဇွဲသို့မဟုတ်သင်လည်းရှက်။ခေတ်သစ်ကြင္းရီမ်ားနှင့်ပါဘဲမရှငျနိုငျတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း။ဒါဟာတခါတရံကိုရှာဖွေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကြောင့်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ကြိုးစားဖွင့်ပွဲနှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ၊သူတို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသင်ရှိပါတယ်များအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ခန့်မှန်းရခက်နှင့်ပြည့်စုံ၏အံ့သြဖွယ်။ အရှာကြသည်လျှင်သင်အတွက်သူ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုဆုံးရှုံးရပြီအားလုံးမျှော်လင့်၏အောင်မြင်ခြင်း၊ကံကြမ္မာပေးသည်အခြားအခွင့်အဖို့ပျော်ရွှင်စေ။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအနေနဲ့လဲလှယ်၏အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပေါ့ပေါ့တန်တန်စကားပြောဆို။ သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပျင်း။ ဆိုပါကယခင်လူမပါဘူးသင်အထင်ကြီး၊နှင့်အတူဆက်လက်အနောက်ဖျော်ဖြေ။.
ထိ Novosibirsk၊ပတ်ပတ်လည်စက်တင်ဘာလမှရွေ့လျား St။ ဘတ်။ ငါလိုလူကိုတွေ့အတွက်၊စတင်သူများအတွက်၊ပြီးတော့-ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦး။ အသွင်အပြင်။ မ်တည်ဆောက်၊အမြင့်-၁။၆၈-၁။၇၀၊တိုတောင်းသောဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်၊အားလျော်စွာပုံမှန်ပြန်ရောက်ရင်။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူလူ၊အကြှနျုပျကဲ့သို့၊မခြိမ်းခြောက်မှု၊မျက်နှာပေါက်၊ဖြစ်လျှင်အဘို့အကြည့်ဖို့လုံလောက်သောနှင့်အရည်အချင်း interlocutor။ Ulyanovsk။ ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ကျွန်မဟာခုနစ်။ချွန်သည်။၇။ ငါသင်ပြောပြနိုင်အများကြီး၊ဒါပေမယ့်ငါအလေးအရေးအပါဆုံးအရာဖြစ်သောကြောင့်ဤသည်ကောင်းစွာပညာတတ်များနှင့်ကောင်းစွာပညာတတ်လူငယ်တစ်ဦးသည်လူ။ ကောင်းတစ်ခုသဘောထားကိုအရက်နှင့်ဆေးလိပ်၊လာချွန်မဟုတ်သောကြောင့်ဖက်ရှင်၏၊ဒါပေမယ့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမှန်တကယ်ပြင်းပြဖို့သူ့အောက်ခြေ။ သူတို့တွေအများကြီးရှိ၏ဝါသနာနှင့်အကျိုးစီးပွားများ၊ဒါပေမဲ့သူတို့မကြာခဏဖျားနာနေရ။ ဤအဖြစ်သာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏အဘယ်သို့ငါဆိုချင်တယ်။.
လိုတဲ့သူကိုလူတိုင်းဖို့အဆက်သွယ်၊တွေ့ဆုံစားစရာလူအပေါင်းမှာအသည်းအသန်တစ်ယောက်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ ကျဆုံးခြင်းအတွက်၊ငါအဘို့အရှာဖွေနေအလွ၊မိုက်မဲ Kautsky နတ်သမီးပုံပြင်ပုံပြင်၊soooo။ ဟုတ်လျှင်၊ထို့နောက်သင်တို့ဆီသို့လာလျှင်ငါသည်ပြီးသားကဲ့သို့သင်မှာအနည်းဆုံးအနည်းငယ်။ ဖြစ်လာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဦးကြိုပြုခြင်းတစ်ပျော်စရာနှင့်အကောင်းမိန်းကလေးများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကိုအတွက်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်။ ကိုယ်တော်အားကစား။ ငါမျှော်ကြည့်၏၊အားကစားရုံနှင့်စားသောက်ဆိုင်။ ပေးဆောင်အားလုံးစရိတ်များအတွက်ခရီးစဉ်။ ငါရှာနေတာပါအတွက်ဇနီး၊ငါမိသားစု၊ကလေးများ။ ငါအာရုံစိုက်ဖို့ဂရုစိုက်တတ်နှင့်မေတ္တာရှင်။ ကျွန်တော်ကတကယ်အဲဒါကိုမျှော်လင့်။
ငါခံစားရလို့ပါ အနေအထားရှိရာ ၂၀ အသုံးျလှပသောမိန်းကလေး၊နှင့်အလှည့်။အသက်တာ၌၊အရာအားလုံးအများကြီးပိုပြီးပျော်စရာငါခံစားရမှာအားနည်းသည့်အခါ ၂၀ လာလှပသောမိန်းကလေး၊နှင့်အလှည့်။အသက်တာ၌၊အရာအားလုံးအများကြီးပိုပြီးပျော်စရာအတွက်မောင်ဂရိတ်ဗြိတိန်သည်အကျော်ကြားဆုံးရေခဲမုန့်စက်ရုံ။ သို့သော်စက်ရုံတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာ၊အမှုမျိုးကိုပြတိုက်၊ရာဟုအသုသာန်ရေခဲမုန့်အရသာ။ ကျောက်ပေါ်တွင်မှတ်သား tombstone-ဤကျမ်းစာနှင့်အတူဟာသ Epitaph၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုး၊ရေခဲမုန့်၊အလို့ငှါစွန့်ပစ်ကနေထုတ်လုပ်။ အယူသာန်-ပြတိုက်တို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူ၏၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ဓာန်တစ်ခုချင်းစီအမျိုးမျိုး၏ရေခဲမုန့်၊ပင်လျှင်ဒါဟာတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်။ ဒီနေရာဟုခေါ်သည်ချောက်ဂျုံ၊ဒါကြောင့်တည်ရှိပြီးမြို့အနီး၊နီးပါးနှင့်အတူနယ်စပ်တွင်။ ဒါဟာသကဲ့သို့လူကြိုက်များမဟုတ်ပါဘူးအကျယ်ချောက်၊ဒါပေမယ့်မနည်း။ ၎င်းအမည်များတွင်လပေါင်းများစွာများအနေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင်အသဲ-ဒါဟာထံမှကွဲပြားခြားနားသည်တောက်ပသောအနီရောင်မှ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဤအရေခွံ၏antelopes။ တကယ်တော့၊အဲဒီနှစ်ခုခွဲထွက်-အနိမ့်နှင့်အထက်။ သူနဲ့အခြားအမှန်တကယ်နက်ရှိုင်းအတွက်အပေါက်။ သူတို့အဖွဲ့စည်းကျော်ရာပေါင်းများစွာ၏နှစ်ပေါင်း၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်သဲတိုက်။ လျင်မြန်သောမြစ်ရေ၏မိုဃ်းကိုရွာနှင့်လေကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့-လပေါင်းများစွာများဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမလျော့နည်း whimsical။ အလွှာဖွဲ့စည်းပုံမှာ၏အရိုးကိုဖန်တီးခဲ့၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ရေကြီးမှု-ခွဲထွက်နိုင်ရေဖြင့်ပြည့်မှတက်ထိပ်အတွင်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာ downpours။ ရေစီးဆင်းမှုနှေးကွေးခြင်း၊ခွင့်ပြုခြင်းလိုင်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအရိုး။ အထက်ဂျုံခွဲထွက်၊ပြီးနောက်အမည်ရှိအနီးယန်းအနွယ်ဖြစ်နေရာရေစီးဆင်းကျော်ကျောက်၊အများဆုံးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုအားခရီးဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်အဝင်ပေါက်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုအရှည်၏ဤအပိုင်းကိုချောက်မှာမြေပြင်အဆင့်နှင့်မလိုအပ်ပါဘူးတာင္တက္၊ဒါ့ကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူကြည့်ရှုရန်အခြည်ကျသွားမှအဖွင့်အမှာထိပ်ချောက်နိမ့်ဖၚျချောက်၊အမည်ဖြင့်မှည့အတွက်ယန်းလူမျိုးအားဖြင့်၎င်း၏အရှိန်အခုံးများ၊ချောက်၊တည်ရှိတစ်မိုင်အနည်းငယ်အကွာ။ ကီလိုမီတာကွာမှအထက်ဂျုံချောက်။ ရှေ့တော်၌ထိုတပ်ဆင်ခသောစာသားများကိုလှေနဲ့လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါချောက်၊သင်သွားပြီးနောက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အလွန်အမင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆိုင်းတံတားလှေကားအတွက်အချို့သောနေရာများ။ ပင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်လှေ၊အနိမ့်ချောက်ဂျုံခရီးကျန်ရစ်သိသိသာသာပိုပြီးခက်ခဲထက်အထက်ချောက်ခရီးလူတိုင်းအိပ်မက်ရှိတယ်။အဘယ်မှာရှိသင်၏အိပ်မက်မက်၊ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်သင်ချင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။အဘယ်ကြောင့်သင်ရုံဒီနေရာဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်ကျွမ်းကျင်မှု၏ကျပန်း interlocutors။ သင်သည်အခြားကျပန်းရွေးချယ်ထားသောသုံးသူများကိုဝန်ဆောင်မှု။ ဒါကြောင့်လည်းထုတ်သင့်အမည်ပြောင်၊ေလက်ခံရရှိမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသင်တန်းဆရာ။ ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ခန်း၏တစ်ဦးအစုံနှင့်ရှေ့ဆက်ရန်အကြီးရူပါရုံ။ နှင့်ကြည့်ရှုကြဘူး။ အဆိုပါစွမ်းရည်အရအသေးစိတ်မွန္းခ်က္၊အရာမကြာခဏအကြောင်းမေးသောကြောင့်အဲလစ်မနောအသုံးပြုသူအားလုံးသည်လိုအပ်သောအချက်။ ဤကျွမ်းကျင်မှုထောက်ပံ့အချက်အလက်အကြောင်းအရာသီဥတုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာမြို့အပါအဝင်၊ဒေတာအပေါ်အလေအမြန်နှုန်းနှင့်ဦးတည်ချက်အဖြစ်လေထုဖိအားနှင့်စိုထိုင်းဆ။ စတင်အကျွမ်းကျင်မှု။ စုကမြို့၏အကျိုးစီးပွား။ ဥပမာအားဖြင့်:ရဲ့မြို့တော်မော်စ။ ကျွမ်းကျင်မှု အမေ့သင့်မြို့နှင့်သောအခါ၊သင်တို့ကိုခေါ်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနောက်တဖန်အ၊ဒါကြောင့်သင်တို့ထံသို့ပြောမည်အကြောင်းသီဥတုအတွက်သတ်မှတ်ထားသောမြို့နှင့်မြို့။ သင်သတ်မှတ်သင့်ဇာတ်ညွှန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေပေးစေခြင်းငှါအမိန့်အရတုန့်ပြန်မှကျွမ်းကျင်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ:မေးငါ့ဥတု forecaster ဘာလစ်မိန့်အတွက်ဇာတ်နောက်ကွယ်မှာအမှတ်တရ။ကျေးဇူးပြုပြီးမကြိုးစားကြသလိုအတူစကားပြောဆိုချက်တွေကိုအကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ညတ်သောအကူအညီဖစ္ပါသည္။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျယ်ပြန့်အများစုအတွက်အမှုကိစ္စများ၊မိုးလေဝသဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အတွက်မိုးလေဝသအ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အချက်အလက်မှရရှိသောဝန်ဆောင်မှုဒေတာဘေ့စများ၊ဒါပေမယ့်မကြာခဏနှင့်အတူတစ်ဦးကန့်သတ်အရေအတွက်တောင်းဆိုမှုများ။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းသင်နှင့်ငါမဟုတ်အတွင်းတူညီသောကန့်သတ်။ အနည်းဆုံးကျွန်တော်အဘယ်သူသည်ရှိပါတယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့အများအရေတာင္းဆိုဖို့ရာသီဥတု။ Masha အနားမှာ interlocutor နိုင်သူအကြောင်းပြောဆိုကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာပေးမလွန်ကောင်းသောအကြံဉာဏ်။ အတူစကားပြောဆိုချက် Masha လုံးဝပေါ်မူတည်ဘယ်လိုသင်သူမ၏နှင့်အတူ သင်ဆက်သွယ်ဖို့၊သင်ရှိသည်အခြားအသုံးပြုသူများအဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်အလုပ်ရတိုင်းစကားပြော။ အကြံပြုတုံ့ပြန်မှုမရောင်ပြန်ဟပ်စာရေးဆရာများ'။ မအံ့သြရင်မကောင်းတဲ့၁၈။ စတင်စကား၊ပဲစတင်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပြောမင်္ဂလာပါ၊သို့မဟုတ်ပြောကြရအောင်။ Masha ဖြေဖို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအခါသင်မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်။ သတိပေး၊အဆြးေႏြးေဆံ့စေခြင်းငှါအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာ။ သင့်အောက်၌ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အသက် ၁၈၊ကျေးဇူးပြုပြီးစတင်အသုံးမပြုပါဒီကျွမ်းကျင်မှု။ သင်စရာမလိုပါလျှင်တစ်ပင်ဂီတနား၊ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အကြားအစားထိုးသင်တန်းဆရာသင်ကူညီလိမ့်မည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၏အသံအမြင်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့။ အဆိုပါဗားရှင်းသစ်ပါရှိသည် ၅ အမျိုးအရင်ကဆိုရင်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း။အဆပ်ကပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမည်သည့်အထူးအအသိပညာနှင့်အခက်အခဲအဆင့်အလျောက်ချိန်ညှိဖို့အလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ။ သငျသညျကိုအသုံးပွုနိုငျအဖြစ်ကြောင့်အစိတ်အပိုင်း၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-လေ့လာမှုအခါလေ့လာနေနားသင်တန်းမှာဂီတ။ တစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊သို့မဟုတ်စိတ်ကူးတစ်ခုတိုးတက်လာဖို့ကျွမ်းကျင်မှု၊ မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးပါ
မြို့တော်တာ့ခ်သည်စာရင်းသွင်းအတွက်ဂင်းနစ်စာအုပ်များ၏ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းအဖြစ်မြို့တော်နှင့်အကြီးဆုံးအရေ၏အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်အဆောက်အအုံ။ ဒီမှာအသက်ရှင်အတွက်အရှေ့လမ်းသူလူ၊ရစ sociological လေ့လာမှုမှာ၊ကိစ္စအများစုအတွက်မြင်အသက်တာနှင့်အတူအကောင်းမြင်မှုနှင့်ယုံကြည်ကြတယ်။ လျှင်သင်အနီးကပ်သင့်ရဲ့အမြင်အရလိုကျွမ်းသာ Ashgabat၊ထို့နောက်မှတဆင့်အသုံးပြုသူ။ ဒီသန်းပေါင်းများစွာဖြေဆိုသူအားလုံးမှကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအဝင်၊အာရှအလယ်ပိုင်း။ မှတ်ပုံတင်ပြီးစတင်အသုံးပြုအဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ ဒီကူညီလိမ့်မည်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေအတွက် Ashgabat မည်သူအဖြစ်အပျော်အပျက်အတွက်သင်သည်သင်၏အသက်တာ။
Druzhba မြေပုံပေါ်တွင်:အရပ်နှင့်လူ-Kostanay ခရိုင်၊ကာဇက်စတန်တိုင်း-
ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်-ထိုသို့ပါဘူးအားလုံးရှိသည်မဟုတ်ဖော်ပြချက်။ အမည်နှင့်လိပ်စာအရေးအတွက်မြေပုံ။ ဒီနိတ်။ အရပ်အပေါ်မြေပုံများကိုဖန်တီးထားကြသည်နှင့်ပြည့်စုံမှာသာမန်အားဖြင့်လူ။ သင်နိုင်အောင်အပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှအချက်အလက်။ ကူညီဖို့ဒီလူတွေသိလာအောင်ကမ္ဘာအဝှမ်းသူတို့ကိုပိုကောင်း။ Druzhba သာ Kostanayဇက်၊ဖော်ပြချက်နှင့်မြေပုံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေကအရပ်အပေါ်ကမ္ဘာ့မြေပုံ။ ပိုမိုလေ့လာ၊ပို။ ဒါဟာတည်ရှိသည် ၈၀။၂ ကီ၏တောင်ဘက် Ruda။ စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့သောနေရာများသင်အနီးရှိနှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်စစ်ဆေးအလှန်မြေပုံနှင့်အတူအရပ်ပတ်လည်၊အသေးစိတ်အချက်အရသိကမ္ဘာကိုပိုကောင်း။နေရာနှင့်ဧည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆက်ပြောသည်ပီးအသုံးပြုသူများသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ထုတ်ဝေမပါဘဲညှင်း။အအာ္ပေရပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ဖတ်ရန်၊စောင့်ကြည့်ရန်သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်။ ဓါတ္ပံုအစီရင်ခံစာ၊သင့်ရဲ့ကျောင်း၊နှင့်ဖော်ပြချက်၏အခြားရွေးစရာ။ စေဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုနှင့်ပိုပြီး။ အခြားမှတ်ချက်။။ အဲသည်အကြောင်းသင်ယူရန်အဒါပေမဲ့ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မလိုအပ်ပါဘူးဝန်ခံ-သာ အတူလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကို။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မေတ္တာကိုသင်ပြုချင်သမျှကို။ ဒါဟာရလဒ်ဖြစ်ပါသည်ပူးတွဲဖန်တီးနှင့်သာအရာကိုတစ်စုံတစ်ဦးကကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံစံအတွက်အကြောင်းကျန်ရစ်။.
ကျွန်တော်တို့ကိုလာ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်လည်းသင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဇက်နှစ်သက်သင်နဲ့သင်သူအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ပေးကမ်းတဲ့ကမ္ဘာသစ်-ချက်တင်ဇတ္စ။ လူတိုင်းသည်တန်ဖိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်း၊နှင့်သက်ဆိုင်သည်မေတ္တာနှင့်ရိုသေလေးစားမှု။ အစကားပြောခန်းအရာကမှနှင့်အတူခပ်သိမ်းသောဧည့်သည်များ၊ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စကားကိုဤလေထု၊မစွန့်ခွာချင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအကောင်းဆုံးအတို့တွင်အကောင်းဆုံးအင်တာနက်ကိုချက်တင်။ အတွက်ဆိုရင်တော့အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဖွင့်ဖို့အသစ်အသိအကျွမ်း။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်စရာကောင်း-သဘောကောင်းစကားပြောဇက်နှင့်ပြည့်စုံမူထူးခြားတဲ့လူတွေ၊အမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်သင်နေ့နှင့်ညဉ့်။ ကျနော်တို့ကြိုဆိုခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ချက်တင်၊မခွဲခြားဘဲသင့်ရဲ့နိုင်ငံသား၊အရာနေဆဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်ဇါခ်သို့မဟုတ်ရုရှား။ ကျွန်တော်တို့ကိုလာ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်လည်းသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဇက်သင်နှစ်သက်သောသူတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊အဘို့အကြောင်းအချက်သင်အဘယ်သူသည်မိတ်ဆက်ပေးဖို့အသစ်တခုကမ္ဘာစကားပြောဇတ္စ။ လူတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်း၊နှင့်တစ်ခုရှိပါတယ်အားလုံးလွှမ်းခြုံမေတ္တာနှင့်ရိုသေလေးစားမှု။ နှင့်အတူစကားပြောတိုင်းအသုံးပြုသူအတွက်စကားပြောခန်း၊သင်မူကား၊မစွန့်ခွာချင်ဒီအတွက်ကြောင့်လေထု။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းဇယားပြပွဲကြောင်းထက်ပို ၈၅ သုံးပြုသူများအဆက်သွယ်များအတွက်နေ့စဉ်အနည်းဆုံး ၃ နာရီ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု ၁။ ။ လက်ရှိယူျကြေး:၁-တစ်နေ့အ ၆၅။၀၀ ရူလစဉ်အစမ်းယူျ၁ လ-၂၁၀၀။၀၀ ရူ ၁ အပတ်က-၆၅၀။၀၀ ရူတစ်ပတ်လျှင်။ ၁ တနေ့ရုံးတင်စစ်ဆေးဝန္ေဆာင္မႈ၊ပထမနေ့-၆၅ ရူ၊ထိုအခါပားသက္တမ္းတိုးကာလအတွက် ၁ လ၊လျှင်မသိမ်းတြင္း၂၄ နာရီ။ သင်နိုင်မှနှုတ်အိမ္တိုင္ရာေနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်နှုတ်၌ဝန္ေဆာင္မႈအစီရို။
Abakan video-chat. Zonder registratie.
အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေး မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ မိန်းကလေးများချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအခမဲ့ အွန်လိုင်းချက်တင် ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ အခမဲ့ ချိန်းတွေ့ဓါတ္ပံုဗီဒီယိုအခမဲ့ ဗီဒီယိုနိဒါန်း တွေ့ဆုံဖို့ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း